တွေးမိတွေးရာ Archives - Page5of6- IT-KOKO
THE ART OF FREEDOM FESTIVAL (Awarded Movies)
By အိုင်တီကိုကို on Friday, January 6, 2012
ကျွန်​တော် အခုတလော စာတော်တော်ရေးဖြစ်နေတယ်၊ အလုပ်မသွားတာက တစ်ကြောင်း၊ ရေးစရာတွေများနေတာက တစ်ကြောင်း ဟိုရေးဒီရေးနဲ့ တော်တော် ရေးဖြစ်တယ်။ ဒီပိုစ့်ရေးပြီးရင်တော့ ကျွန်တော် ကျောင်းအတွက် စာရေးရပါအုံးမယ်။ Report ရေးရမှာဆိုတော့ စာတွေလိုက်ရှာရတယ်လေ။ အိမ်က Internet connection ကတော်တော်လေး ကျနေတယ်။ ရလိုက် မရလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ စာရှာရတာ စိတ်မပါတော့လို့ ဗီဒီယိုလေးတွေ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်” တုန်းက ဆုရခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေ သွားတွေတယ်။ အားလုံးကောင်းတယ်။ ကောင်းလို့လဲ ဆုရတာပေါ့။ အဓိပ္ပါယ်တော်တော်ရှိတယ်။ရှိမှာပေါ့ အဖြစ်မှန်တွေကို ရိုက်ထားတာကိုး။ အဲ့ဒါလေးတွေ လိုက်ရှာရင်း သူများတွေလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကြည့်လို့ရအောင်၊ ကျွန်တော်ဆီမှာလဲ မှတ်တမ်းလေးကျန်ခဲ့အောင် ရည်ရွယ်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ Copyright နဲ့ညိနေရင် ကျွန်တော် ပြန်ဖြတ်ပေးပါ့မယ်လို့။Freedom ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် …
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ရယ်စရာလေးတစ်ခုတွေ့လို့ ရေးချမိသွားတယ်။ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း ရန်ကုန်ကနေ ရောက်တာ မကြာသေးဘူးလေ။ အလုပ်စလုပ်ခါစဆိုတော့ ဒီမှာ အသားတော့ မကျသေးဘူးပေါ့။ သူပျင်းနေမှာ ဆိုးလို့ စကား ပြောရင်းနဲ့ ရယ်စရားလေးတစ်ခု သွားတွေ့တယ်။ ရယ်လည်း ရယ်ချင်တယ်၊ သနားလည်း သနားမိတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူနဲ့ သူ့ကောင်မလေးတို့ နှစ်ဉီး ရန်ကုန်မှာ သွားရင်းနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အရာလေးပါ။ သူတို့ နှစ်ဉီး ချိန်းတွေ့ဖို့နေရာက အင်းယားကန်ဘောင် ဆိုတော့ ထိုင်လို့ကောင်းမယ်၊ လေညှင်းလေးခံပြီး စကားပြောမယ်ပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ထိုင်ခုံက တစ်ခုမှ မအားဘူးတဲ့။ နေကလည်း ပူ၊ နေ့လည်စာက စားပြီးခါစဆိုတော့ ထိုင်ဖို့နေရာ လိုက်ရှာတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ နှစ်ခေါက်၊ သုံးခေါက်လောက် လမ်းလျှောက် ပတ်ကြည့်တော့ ထိုင်ခုံတော်တော်မျာများကို ၆နှစ် …
Sweet Android Highschool
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, January 4, 2012
Android ဖုန်းတွေ မှာ Brand အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သိ ကြမှပါ။ အဲ့ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်နေတဲ့ တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော် က ဂျပန်ကာတွန်းကားတွေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကြည့်တာဆိုတော့ အခုဆို တော်တော် များများ ကြည့်ဖူးပြီးပြီပေါ့။ ကျွန်တော့လို ဝါသနာတူတွေကတော့ ကျွန်တော့ နည်းနည်းပြောရင် သိလောက်မယ်ထင်တယ် ။ မကြည့်ဖူးသူများ ကလည်းစမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။ စွ ဲသွားပါလိမ့်မယ်။ အခုပြောမှာက ဖုန်းနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်၊ ကာတွန်းကားနဲ့လည်းဆိုင်တယ် ။ ထူးထူးခြားခြား အောက် ကနာမည်လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါလား.. Moto-Laura-chan (Motorola) Sam-Sung-chan (Samsung) H-T-Syee-chan (HTC) Elle-G-chan (LG) Soni-Eri-chan (Sony Ericsson) Apple အတွက်တောင်ပါသေးတယ်။ Apple-Kun …
By အိုင်တီကိုကို on Wednesday, December 21, 2011
ကျွန်တော် အလုပ်များနေလို့ မအားဖြစ်နေတာနဲ့ ဗီဒီယို လေးတွေပဲ တင်လိုက်တယ်။ များများစားစားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာပေးလေးတွေပါ။ Youtube မှာတွေ့လို့ ကြိုက်သွားပြီး ပြန်တင်လိုက်တာ။ ဒါကတော့ Down Syndrome ဖြစ်တဲ့ သူတွေကို လူတွေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်မှုတွေရှိလဲ ဆိုတာတွေကို လိုက်ရိုက်ထားတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Deaf ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို ရိုက်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ အရပ်ပုတဲ့ သူတွေကို ပါ။ ဒါကတော့ တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုတွေပါ။ Nick Vujicic ပြောသွားတာလေးတွေက တော်တော်လေး ကောင်းသလို့ အားကျစရာလဲ ကောင်းပါတယ်။ သူကြိုးစားခဲ့တာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ့ခဲတာတွေ၊ စတဲ့ အရာတွေကို ပြောထားတဲ့ မိန့်ခွန်း ဗီဒီယိုပါ။ သုံးပိုင်းလုံး တင်လိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ အပိုင်း ၂ အပိုင်း …
Kindness keeps the world afloat!
By အိုင်တီကိုကို on Friday, December 16, 2011
သူငယ်ချင်းတွေ Facebook မှာ တင်ထားတာကိုတွေ့လို့ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်း လုပ်သင့်၊ လုပ်ထိုက်တဲ့ အရာလေးတွေ၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကောင်းမှု့ ကိုယ့်စီပြန်လာမယ် ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့တဲ့ စာရိတ္တပိုင်း ဆိုင်ရာလေးတွေကို မသိမသာနဲ့ ရိုးရိုးလေးပြသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ သီချင်း စာသားလေး ကိုလဲကြိုက်တယ်။ ရိုက်သွားတာလေးတွေကလဲ မိုက်လို့ ပြန်တင်ချင်စိတ်ပေါက်သွားလို့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ video ကတော့ WebYuki Technology မှာတင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Background music က Matisyahu – One Day ပါ။ လူငယ်တွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကူညီလိုစိတ်လေးတွေ ရစေချင်တယ်၊ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်ရလို့ ကိုယ်ပြန်ရလာတဲ့ ပီတိက ဘယ်သူမှ မခံစားနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း တစ်ကယ့်စစ်မှန်တဲ့စိတ်နဲ့ …
By အိုင်တီကိုကို on Friday, November 25, 2011
Facebook မှာတော်တော်လေးကို ဟော့သွားတဲ့ သတင်းတွေက တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချတာက စတာ အခုဆို ရေသန့်ဘူး ထိဖြစ်လာပြီ။ ဘာတွေမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူး။ ပြောကျ၊ ရေးကျ၊ share ကျနဲ့ ပွစိကို ထနေတာပဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ တတ်လာလိုက်တဲ့ notifications အားလုံး အဲ့အကြောင်းတွေပဲ။ စိတ်ရှုပ်လာတယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး ငြင်းရတဲ့ အရသာ ကဘာများကောင်းလို့လဲဗျာ။ ငြင်းကျ၊ ရန်ဖြစ်ကျ နဲ့ အချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်။ ဘားမှ အကျိုးမများသလို ဘားကောင်းကျိုးမှဖြစ်မလာဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတဲ့ နေ့ကဆိုရင် သတင်းကတော်တော်လေးကို ပြန့်သွားတယ်။ Facebook ကြောင့်လို့ထင်တယ်။ ကောင်းပါတယ် သတင်းပြန့်တာမြန်တာ။ လူများများ ကို မြန်မြန်သိအောင် ပြောလို့ရတာပေါ့။ အကျိုးရှိပါတယ်။ အခုဟာက သတင်းဖြန့်တာမဟုတ်တော့ဘူး။ spam လုပ်သလိုဖြစ်လာပြီ။ ပြီးတော့ …
Very Busy? Actually Not That Busy!
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, November 24, 2011
ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တော်တော် အလုပ်များနေတယ်။ ဘာတွေများနေလဲ ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ရရင်… ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရဲ့ Cultural Show မှာ ဝင်ပါထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ Cultural Show တစ်ခါမှမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေလဲ အများကြီ:ရှိရဲ့သားနဲ့ မလုပ်နိုင်ရမလားဆို ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ စုပေါင်းပြီး လုပ်လိုက်တာ အခုဆို လက်မှတ် အားလုံးနီးပါး ကုန်သွားပါပြီ။ လာမယ့် Sunday ဆိုရင် ပွဲစပါပြီ။ ဟိုးအရင်တုန်းတွေကတော့ International Student Festival ဆိုပြီးတော့ လူအများနဲ့တော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုကတော့ မြန်မာတွေပဲ လုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ အစစ အရာရာ လုပ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ Performers တွေက Practice မလာ၊ လုပ်ရမှာတွေက မပြီးသေး။ ပြောထားပြီးသား အရာတွေက ဖြစ်မလာ။ အားလုံး တော်တော်လေး ပင်ပန်းတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Main …
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, November 22, 2011
မနေ့ညတုန်းက စာလုပ်မယ်ဆိုပြီး laptop ဖွင့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ Facebook ရောက်သွားတော့ မြန်မာ ဘောလုံးပွဲအကြောင်းတွေ တင်ထားတာနဲ့ ဝင်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဗီယက်နမ် နှင့် ကန်နေတဲ့ ပွဲကို live ကြည့်လို့ရနေတာနဲ့ ဆက်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ မြန်မာ ကစားသမားတွေလို့ ပြောလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အမြဲ အားပေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆို သုဝဏကွင်းထဲမှာကို သွားအားပေးဖူးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မကြည့်ရတာလဲ ကြာနေသလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သတင်းဆိုလို့ ဘားမှမကြားရဘူးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဆိုတော့ သွေးကပဲ ပြောလို့လား မသိဘူး ကြည့်ရင် ရင်ခုန်တယ်။ ဂိုးသွင်းနိုင်ရင် ပျော်တယ်။ ရှုံးရင် ဝမ်းနည်းတယ်။ မန်ယူကန်တာ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းကောင်း မြန်မာပွဲတွေလောက် ရင်မခုန်ဘူး။ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြီးတဲ့အထိကြည့်သွားတာ။ …
Unboxing Razer Prizes
By အိုင်တီကိုကို on Thursday, November 10, 2011
ကျွန်တော် ဒီနေ့ပဲ ရထားတဲ့ ဆုတွေကို ဖောက်လိုက်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်ချင်တာနဲ့ပဲ ဖောက်လိုက်တယ်။ Mouse & Head Phone ကို စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တယ်။ Laptop က စစချင်းမှာ USB နဲ့ ဆက်ထားတာကို မသိတော့ ဘားမှလုပ်လို့မရဘူး။ နောက်တော့မှ Razer ကနေ Drivers တွေသွင်းလိုက်တော့မှ အားလုံး အိုကေသွားတော့တယ်။ Mouse ကတော့ အရမ်းမကောင်းပေမဲ့ သုံးလို့တော်တော်ကောင်းတယ်။ sensor ကတော်တော်ကောင်းပြီ: အရမ်းမြန်တယ်။ မီးတွေလင်းနေတော့ တော်တော် လှတယ်။ Keyboard ကိုတော့ မလိုသေးလို့ မဖွင့်ထားဘူး။ နောက်မှပဲ စမ်းကြည့်တော့မယ်။ ပြဿနာ စတာက Head Phone Set ဘားမှလုပ်လို့မရဘူး။ မီးလဲ မလင်း၊ အသံလဲ မကြားရတော့ တော်တော် …
1.11.11 +1st Razer Prizes
By အိုင်တီကိုကို on Tuesday, November 1, 2011
ကျွန်တော်စာ မရေးဖြစ်တာတောင် တော်တော်ကြာ နေသလိုရှိနေပါပြီ။ မအားတာကြောင့်ပါ။ အလုပ်ကရှုပ်ဆို ဟိုလိုက်ပါ၊ဒီလိုက်ပါ လုပ်နေတာကိုး။ ပါတယ်ဆိုတာက တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့အုံး။ ပြိုင်ပွဲလေးတွေ လိုက်ပြိုင်နေတာပါ။ ကျောင်းမှာဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲတွေက တော်တော်ရှိတယ်။ ဘောဒါတွေ အဖော်လိုလို့ ကျွန်တော် ဝင်ပြိုင်မိခဲ့တယ်။ Razer ဆိုရင် ဂိမ်းဆော့တဲ့သူတွေ မသိသူမရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမဆု ရသွားပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ပြိုင်တဲ့အဖွဲတွေထဲမှာ top 10 ကို ရွေးပြီး ဒီနေ့မှာ နောက်ဆုံး Presentation လုပ်ခိုင်းပြီး 1st, 2nd, 3rd ရွေးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ၂၉မှတ်ရပါတယ်။ ပျော်ရွင်စရာနေ့လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ၁.၁၁.၁၁ မှာ ပထမဆု တစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရသွားတဲ့ Design က မိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရမယ်။ တစ်ကယ်တော့ …